V ရဲ့ မွေးနေ့ကို Snap ပုံနဲ့တကွ Caption အဆန်းနဲ့ ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ပုကျိလေး Jimin
ဒီဇင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့ကတော့ BTS အဖွဲ့ဝင် V ရဲ့ ၂၆ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတလွှားက ပရိသတ်တွေက ပုံစံမျိုးစံ၊ ဘာသာစကားမျိုးစုံနဲ့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြသလို V အတွက် ထူးမြတ်တဲ့နေ့မှာ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာအမှတ်တရတွေ ဖန်တီးနေခဲ့ကြပါတယ်။ V ကို အနီးကပ် ထူးထူးဆန်းဆန်း ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြသူတွေကတော့ BTS အဖွဲ့ဝင်တွေပါပဲ။
အားလုံးထဲမှာ Jimin ကတော့ ထူးထူးဆန်းဆန်းအရေးအသားနဲ့ ဟာသမြောက်တဲ့ V ရဲ့ပုံကိုသုံးပြီး ဆုတောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒါကပဲ လူအများကြားမှာ ရေပန်းစားသွားပြန်ပါတော့တယ်။ December 30 ရက်နေ့ မနက်အစောပိုင်းမှာပဲ Jimin ဟာ V ရဲ့ Snap ပုံနဲ့တကွ “My love. Happy Birthday, bro” (ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ.. ငါ့အချစ် ဘရိုရေ) ဆိုပြီး ရေးသားကာ Twitter မှာ တင်ချခဲ့ပါတယ်။
မွေးနေ့ရှင်ရဲ့ လှပခန့်ညားတဲ့ပုံမဟုတ်ဘဲ တကယ့်မှ သဘာဝဆန်ဆန်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ရာမှ နိုးလာခါစ အိပ်ချင်မူးတူးပုံဖြစ်ဟန်တူပြီး ဒါကို မွေးနေ့မှာ တင်ချလိုက်တဲ့ အကောင်းဆုံး၊ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းကြီး Jimin ပါပဲ။ ပရိသတ်တွေကတော့ Jimin နဲ့ V တို့ရဲ့ ချစ်ခင်နွေးထွေးမှုကို သဘောတွေကျနေကြပြီး Jimin ရဲ့ Caption ကိုလည်း နှစ်ခြိုက်နေကြပါတော့တယ်။ Jimin က အစပြုလိုက်တဲ့ “My love. Happy Birthday, bro” ဆိုတဲ့ စာသားကို အခြားမန်ဘာတွေပါ လိုက်သုံးပြီး Trend တွေ ဖြစ်ကုန်ခဲ့ပါပြီ။
နှစ်ပေါင်းများစွာအတူဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အတွက် အဖွဲ့ဝင် (၇) ယောက်စလုံးက တကယ့်ညီအစ်ကိုအရင်းတွေလိုဖြစ်နေကြပြီး စဖို့နောက်ဖို့ ဝန်မလေးကြတော့ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် Jimin နဲ့ V တို့က ၁၉၉၅၊ တနှစ်တည်းမှာ မွေးဖွားသူတွေဖြစ်တာကြောင့် ရွယ်တူချင်း ဆေးထိုးကြလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီတခါမှာတော့ V ရဲ့ ၂၆ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ကတော့ Jimin ရဲ့ Snap ပုံနဲ့အတူ ကမ္ဘာကျော်သွားပြန်ပါပြီ။
Photos: BigHit Twitter
Next “Youth of May” ရဲ့ အဆက်ပုံစံ drama အတို​လေးထဲမှာ ထပ်မံဆုံစည်းသွားကြဦးမယ့် Lee Do Hyun နဲ့ Go Min Si »
Previous « အချစ်ကို ရှာဖွေခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မျှော်လင့်နေကြောင်းကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ Yang Mi
သူမ ပြောပြလာတဲ့ Rosé ရယ်လို့ ဖြစ်လာစေခဲ့တဲ့ အကောင်းဆုံးအခိုက်အတန့် (၃) ခု
လတ်တလော ရေပန်းစားနေတဲ့ အချောဆုံး Korea မင်းသား (10) ယောက်